Wasaarada waxbarashada Somaliland ayaa go'aanadan soo saartay:- – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasaarada waxbarashada Somaliland ayaa go’aanadan soo saartay:-
Midabadda dirayska la mideeyay waxaa ku jira 75% midabaddii diraysyaddii kala jaadka ahaa ee hore ardaydu u xidhan jireen oo dugsiyadda gaarka ah mid waliba midabka uu doono ardayda ku waajibiyay.
Midabadda dirayska la mudeeyay wuxuu ka mid yahay dharka wadanka lagu iibiyo, maadaama aan la waajibinin tayo iyo nooc gaar ah. Sidaa awgeed, dooda ganacsatada Hargeysa ee odhanaysa waanu khasaaraynaa waxay u muuqataa suuqu ha noo xidhnaado
Gudigu waxay ogaatay inay jiraan dugsiyo heshiis kula jira ganacsato gaar ah oo ardayda ku qasba inay meherado gaar ah kasoo iibsadaan. Taasoo ka soo horjeeda mabaadii’ida suuqa xorta ah.
Maadaama wasaaraddu go’aanka midaynta dirayska soo saartay badhtamihii sanad dugsiyeedka 2020/2021, lana fulinayo sanad dugsiyeedka 2021/2022, wuu yar yahay dirayska la toley ee loogu talo galay sanad dugsiyeedka soo socda. Sidaa awgeed, ma muuqdo khasaare dhabar jab ah oo ku iman kara ganacsatada.
Midaynta diraysku waa astaan qaran oo ardayda u saamaxaysa inay dirayskooda xidhaan, haddii ay dugsi ka bedeshaan iyo inay kala dhaxlaan ardayda danyarta ah.
Go’aanka midaynta dirayska ee Wasaaradda Waxbarashadda iyo Saynisku wuxuu dhaqangal noqonayaa sanad dugsiyeedka 2021/2022, sidii lagu cadeeyay wareegtadii hore; haddii eebbe idmo.
Dugsiyadda waxaa ka reeban inay ardayda ku qasbaan inay dirayska ka soo iibsadaan meherado gaar ah. Waayo, waa sharci darro in cid gaara loo xidho suuqa dirayska iyo qiimo ka duwan kan suuqa lagu naas naajiyo meherado gaar ah. Taasoo ka hor imanaysa mabaadii’da suuqa xorta ee dastuurku jideeyay.
Keenista, tolida iyo iibinta dirayska way siman yihiin ganacsatada Somaliland oo dhami.
Ganacsatada dirayska ardayda ka ganscsata waxaa ku waajib ah inay ardayda ka iibiyaan dhar asturaya ardayda oo ku haboon dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka (Sida xijaabka hablaha iyo inuu dharku qarinayo jidhka), caafimaadka ardayda iyo cimilladda Somaliland, isla markaana uu ahaado dhar ay ardaydu iibsan karaan qiimo ahaan, lana heli karo marka loo baahdo.
Wixii Faahfaahin dheeraada waxaa lagala xidhiidhi kartaa Xarunta Wicitaanka Tell: 9666 ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska iyo Waaxda Daryeelka WWS.
Previous articleWaa Maxay Faa’iidada Caafimaad ee Laga Helo Koostada?
Next articleXog Xaasasi ah Loolanka Maayarnimada Berbera.
Pompeo oo Shaaciyey xilliga la Saxeexayo heshiiska Taliban
Somaliland iyo go’aankii ay ku joojisay Diyaaradaha ka imanaya muqdisho